We She Me: Comment Form ထည့်နည်း
ဇနိ - 6/29/08, 10:34 PM
ကိုအန်ဒီပြောသလို လိုက်လုပ်ကြည့်တာ အဆင်ပြေတယ်..
MyMetro - 6/29/08, 11:28 PM
ကျွန်တော်လည်း လုပ်ကြည့်ပီးသွားပီ။ အဆင်ပြေပါတယ်။ အသိပညာ မျှဝေပေးတဲ့ ကိုအန်ဒီကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ...။
nu-san - 6/30/08, 12:15 AM
စမ်းလုပ်ကြည့်ရမယ်.. အမက blog ကို သိပ်မပြင်ဖြစ်ဘူး။ ပျင်းတာရော.. ရှိပြီးသားလေး ပျက်သွားမှာစိုးတာရော.. မထိရက် မတို့ရက်နဲ့ ပုံတုံးဖြစ်နေတာသာကြည့်.. :D
TZA - 6/30/08, 1:16 PM
ရက်ရာဇာ - 6/30/08, 2:36 PM
ကျေးဇူးပဲဗျာ လည်လည် လည်လည် နဲ့ ရသွားပြီ
စပ်မိစပ်ရာ - 6/30/08, 3:02 PM
WordPress သမားတွေကတော့ အေးဆေး :P
အညာသား - 6/30/08, 8:43 PM
ကျေးဇူးပါဗျာ...။ စမ်းသပ်ကြည့်အုံးမယ်။ :)
ဘလူးဖီးနစ် - 6/30/08, 11:09 PM
ကျွန်တော့် တန်းပလိတ်က (p class='comment-footer') အဲဒါလေး မပါဘူးဗျ ဒုက္ခဘဲ လုပ်မရဘူး အီး
kom - 7/1/08, 1:32 AM
ဟီဟီ. တို.လဲ nu san လိုဘဲ. သိတ်မတတ် တို.စာရှိုက် လို.ရရင်ပြီးရော. မပြင်ရဲဘူး။ ရှိတာလေးပါ ပျောက်သွား မှာစိုး လို.။ သူ.အဆင်.နဲသူပေါ.ကျေးဇူးတ၈်တယ်။ပေးသူ ကပေးပေမဲ. ဥဏ်ရည် မျွှိ လို.
ကိုရဲ - 7/1/08, 1:18 PM
Anonymous - 7/1/08, 11:27 PM
ပိတ်ရက်မှ စမ်းကြည့်ဦးမယ် ။ ဂျစ် ဘလောဂ့်က tech link list မှာ ဒါ ထည့်လိုက်တယ်း)
Htoo Tay Zar - 7/3/08, 1:20 AM
မနေ့က ကွန်မန့်ရေးတာ မတက်လာလို့ ထပ်ရေးလိုက်တာ အခု ထည့်ထားတာလေး တော်တော်မိုက်တယ် အကို ကွန်မန့်ရေးရတာ အဆင်ပြေတယ်။ အခြား blogger အတွက် ကွန်မန့်ဆိုရင် Intense Debate လည်း ကောင်းတယ် အကို Gravatar, Open ID လည်းရတယ် နောက် recent comment widget, top commentators widget တွေလည်း အကုန်ရှိတယ် အကို...
TZA - 7/20/08, 7:25 AM
ဒါတော့ရသွားပြီ၊ Y! pipes ကတော့ ခုထိမရသေးဘူး၊ ကြိုးစားတုန်းပဲ။ ဟဲဟဲ..
Andy Myint - 7/20/08, 6:34 PM
ကျွန်တော်ရေးထားတာကလည်း မပြည့်မစုံ ဖြစ်နေတယ်။ လိုအပ်ရင် ပြောလေ အားမနာပါနဲ့။
Anonymous - 2/3/10, 10:43 PM
First time visit to your blog and very impress for your contents.
Unable to find your contact email address.
The reason for this is I want to add your blog link in my website, if you are Ok.
Andy Myint - 2/5/10, 10:12 PM
Please feel free to link.. I'd be thankful.